Mushaar Intee la eg ayuu Isbuucii ka qaadan doonaa Bruno Fernandes kooxda Manchester United? – Gool FM
(Manchester) 29 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa goordhoweyd ku dhawaaqday inay la saxiixatay laacibkii khadka dhexe ee Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes.
Inkastoo Red Devils aysan si rasmi ah u xaqiijinin mushaarka uu ka qaadan doono saxiixeeda cusub haddana wargeysyada ka soo baxa gudaha England ayaa xaqiijinaya lacagaha uu ka qaadan doono Toddobaadkii.
Wararka waxay sheegayaan in isbuucii saxiixa cusub ee Manchester United uu qaadan doono 70,000 oo gini.
Xiddiga xulka qaranka Portugal ayaa u ka soo dagay magaalada Manchester isla markaana tijaabada caafimaadka u maray kuna biiray kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska.
Wargeyska “The Guardian” ayaa warinaya in laacibkan khadka dhexe uu mushaar ahaan ugu qaadan doono garoonka Old Trafford Isbuucii 70,000 oo gini, inkastoo laga yaabo in lacagahaas sarre loo qaado maadaama ay ku xiran tahay bandhigiisa.
Bruno Fernandes ayaa dhaliyay 15 gool, wuxuuna caawiyay 14 gool kale, 28 kulan uu kooxdiisii Sporting Lisbon u saftay xilli ciyaareedkan, waxaana laga yaabaa in kooxda Ole Gunnar Solskjaer uu kulankiisii ugu horreeyay u safto ciyaarta ay wajahayaan Wolverhampton Wanderers Sabtida.